Degmada Hodon oo sanadkii labaad oo xiriir ah u soo baxday afar- dhammaadka tartanka K/Cagta degmooyinka+Sawirro - Warka gudaha Somaliya - Local News in Somalia
Home WARKA GUDAHA Degmada Hodon oo sanadkii labaad oo xiriir ah u soo baxday afar-...
Degmada Hodon oo sanadkii labaad oo xiriir ah u soo baxday afar- dhammaadka tartanka K/Cagta degmooyinka+Sawirro
Degamda Hodon ayaa usoo baxday semi finaalka tartanka kubadda cagta degmooyinka Gobolka Banaadir 2018 kadib markii ay 3-2 uga adkaatay degmada Xamar Wayne oo ay kulan xiiso leh ku qaateen garoonka Banaadir.
Laacibka No-11 Cabduqaadir Maxamed Cilmoogoe ayaa Hodon hogaanka ciyaarta u dhiibay daqiiqai 4-aad , waxaana 12 daqiiqo kadib u labeeyay laacibka No- 9 CabdiMalin Cumar Caamir.
Gool kama ah uu daqiiqadi 21 iska dhaliyay laacibka No-18 Maxamed Xasan Aadan ayaa Xamar Wayne ka caawiyay in ay ciyaarta 2-1 ka dhigaan sidaa ayaana qaybta hore lagu kala nastay.
Marki laysku soo laabtay laacibka No-4 Maxamed Maxamuud Mursal ayaa Hodon daqiiqadi 47 u saxiixay goolka 3-aad, waxayan sidoo kale iska qasaariyeen fursado goolal kale ay ku dhalin kareen.
Xamare Wayne oo aan quusan ayaa daqiiqadi 65 dhalisay goolka labaad waxaana u dhaliyay Xiddiga No-16 Cali Sharma Arke Muuse waxayan sameeyeen iskudayo ay ku doonayeen in ay kusoo barbareeyaan waxayse dhaafi waayeen daafyada joogga dhaadheer ee degmada Hodon, waxayna ciyaarta kusoo idlaatay 3-2 oo ay guusha ku raacday degmada Hodon.
Degmada Hodon ayaa sidaa ku xaqiijisay in ay sanadki labaad oo xiriir ah usoo gudubtay semi finaalka tartanka kubadda cagta degmooyinka, waxayna wajahi doontaa Degmada Waaberi oo ay sanadki hore ku kulmeen kama dambaysta tartanka.
Waxaana laacibka ciyaarta loo aqoonsaday xiddiga No-11 Cabduqaadir Maxamed Cilmooge
Dhanka kale waxaa kulanka saddaxaad e wareega 8-da 14 September garoonka Banaadir ku wada qadan doona degmooyinka Howl-wadaag iyo Shangaani.